चरित्रहत्याको अर्को श्रृंखला - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
चरित्रहत्याको अर्को श्रृंखला
- सुव्रत आचार्य, जनक तिमिल्सिना
ग्ल्यामर र विवादलाई एकअर्काको पूरककै रूपमा लिइन्छ । अझ मनोरञ्जन संसारमा त यौन तथा रोमान्सका स्क्यान्डलले चर्कै रूप लिन्छन् । नेपालजस्तो बन्द एवं पुरातन सोच हावी भएको समाजमा कहिलेकाहीँ सतहमा आउने यस्ता स्क्यान्डलले ठूलै सुनामी ल्याउँछन् । पश्चिमा देशका सेलिब्रिटी तथा मनोरञ्जनको दुनियाँको तुलनामा नेपालजस्तो कम विकसित देशमा यस्ता घटना प्राय: बन्द कोठाभित्रै सीमित रहन्छन् ।
यद्यपि पछिल्लो दशकमा नयाँ टेक्नोलोजी, इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालका कारण यौन र प्रेमसँग जोडिएर नेपाली सेलिब्रेटीहरू पनि विवाद एवं मानसिक तनावको शिकार हुने घटना बढ्न थालेका छन् । खासगरी, नितान्त निजी विषय मानिने यौनसँग जोडिएर बाहिर आउने यस्ता स्क्याण्डलले ठूलै मानसिक, सामाजिक तथा व्यवसायिक क्षति पुर्‍याउने गरेका छन् ।
कतिपय सन्दर्भमा व्यक्तिगत असावधानी त कतिपय सन्दर्भमा गलत आरोपको कोपभाजनमा परेर विशेषत: महिला कलाकारहरूले मानसिक तनाव मात्र बेहोरिरहेका छैनन्, सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत ठूलै क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हुन्, मोडल तथा अभिनेत्रीद्वय सुरविना कार्की र सुजना ढकाल । चलचित्र ‘झेली’बाट फिल्म नगरीमा भित्रिएकी अभिनेत्री सुरबिना एक अश्लील सामग्रीसँग आफ्नो नाम जोडेर प्रचारमा ल्याइए पछि तनाव परेकी छिन् भने अर्की अभिनेत्री सुजना ढकाल आफ्नो फेसबुक एकाउण्ट ह्याक गरेर नांगो तस्बिर लिक गरिएका कारण चर्को तनाव झेलिरहेकी छिन् ।
दुई साताअघि अभिनेत्री सुरबिना कार्की बक्स अफिस फिल्म एवार्डको सिलसिलामा लण्डन पुगेकी थिइन् । एवार्ड समारोहमा आफ्नो प्रस्तुति दिन लण्डन पुगेकै बेला उनले चर्को मानसिक दबाब सामना गर्नुपर्‍यो । त्यसको मुख्य कारण थियो– उनको कुनै पुरुष व्यवसायीसँग भनिएको ‘फेक सेक्स टेप’ । लण्डनमा जतिबेला यो कुरा सुरबिनाको कानमा पर्‍यो, त्यतिबेलासम्म नेपालमा केही पत्रकार र सिने क्षेत्रका थुप्रै मानिसका मोबाइलमा उक्त सेक्स टेप भाइरल भैसकेको थियो । यतिसम्म त ठीकै थियो, जब उनकै थर जोडेर सेक्स टेपको हवाला दिँदै केही अनलाइन तथा फेसबुक समाचार बन्न थाले उनी छांगाबाट खसेजस्तै भइन् । ‘लण्डन जानुअघि नै मैले उक्त भिडियो हेरिसकेकी थिएँ । एक महिनाभन्दा बढी भयो, मलाई मेरो एक साथीले हेर त तँ जस्तै देखिने रहेछ भनेर त्यो भिडियो म्यासेज बक्समा पठाएको थियो । मैले म जस्तै देखिने त दुनियाँमा कति छन् कति भन्दै हाँसेर टारेकी थिएँ त्यसलाई, तर जब उक्त भिडियो क्लिपकी युवती म नै हुँ भनेर ठोकुवा गर्दै मानिसहरूले त्यो भिडियो हेर्दैछन् भन्ने कुरा थाहा पाएँ, त्यसपछि मलाई दिक्क लागेर आयो ।’ सुरबिनाले साप्ताहिकसँगको भेटमा भनिन् ।
उक्त अश्लील सामग्रीको हवाला दिँदै केही अनलाइनले कार्की थरकी एक नेपाली नायिकाको ‘सेक्स टेप लिक’ भनेर समाचार नै बनाए । त्यसपछि उक्त सामग्री मोबाइल टु मोबाइल मानिसहरूको हातहातमा पुग्न थाल्यो । सुरबिनाका अनुसार उक्त भिडियो सामग्रीमा देखिएकी महिला उनी होइनन् । कार्कीले दाबी गर्दै भनिन्– ‘एक त ब्लोर देखिएको त्यो भिडियोमा ती महिलाको पूरा अनुहारको २० प्रतिशत भाग पनि देखिएको छैन, अनि अनुहारको दायाँपट्टीको थोरै अंश देखिएको आधारमा ती युवती म नै हुँ भनेर कसैले बेफ्वाँकमा त्यसै कसरी दाबी गर्न मिल्छ ?’
किन होइनन् सुरबिना ?
सुरबिना लण्डनबाट नेपाल फर्किएपछि सबैभन्दा पहिले टेकुस्थित
महानगरिय अपराध महाशाखा उजुरी दिन पुगिन् । त्यसपछि केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो पुगिन् । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा उक्त भिडियो अपलोड गर्ने पोर्न साइट पनि फेला परेको छ । पोर्नहब डटकम नामको उक्त साइटमा स्वेता नाममा उक्त भिडियो तीन महिनाभन्दा अघि अपलोड गरिएको पाइन्छ । एएमएस शीर्षकमा रहेको ४८ सेकेन्डको उक्त भिडियोमा महिलाको अनुहारभन्दा पछाडिको भाग बढी देखिएको छ जसमा एक पुरुष र एक महिला यौनक्रीडामा मग्न छन् । पछाडिबाट खिचिएको उक्त होममेड सेक्सटेपमा गोरी वर्णकी युवतीका साथ मोटो शारीरिक बनावटका पुरुष देखिन्छन् ।
यसो भन्छ प्रहरी
‘त्यो सुरबिना कार्कीको भिडियो होइन, कहाँबाट जेनरेट भएको हो ? हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’ सीआईबीकी प्रवक्ता मीरा चौधरीले साप्ताहिकसँग भनिन् । सुरबिना भन्छिन् ‘म हो भनेर सुरुमा जसले भिडियो भाइरल गर्‍यो, प्रहरी उसको खोजीमा छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भाइरल भैरहेको हरेक च्यानल र नेटवर्कको खोजी एवं अनुसन्धान थालिसकेको छ । कुन नियतले मेरो संलग्नता नै नभएको विषयमा मलाई जोडेर बदनाम गर्ने षड्यन्त्र गरियो त्यसको सत्य–तथ्य चाँडै पत्ता लाग्ने विश्वास लिएकी छु ।’
प्रहरीले यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका घटनामा छानबिन गरिसकेको छ । ‘अनुहार मिल्ने यस्ता केस पनि आउने गरेका छन्,’ महानगरीय अपराध महाशाखाका एक अर्का प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘यसले सम्बन्धित व्यक्तिलाई ठूलै मानसिक तनावमा पार्ने गरेको छ । अहिले त सोसल साइटहरूमा यस्ता केसलाई जोकसैले चरित्रहत्या गर्ने माध्यम समेत बनाउन थालिएको छ ।’
नग्न फोटोको लफडा
चलचित्रका कारण उति चर्चामा नरहेपनि सुजना ढकाल विभिन्न तस्बिर तथा इन्टरभ्युमा छाइरहन्छिन् । चलचित्रमा उनको खासै उपस्थिति नभए पनि म्युजिक भिडियोमा देखिरहने ढकालले नयाँदिल्ली, गोवा तथा दुबईतिरका आफ्ना तस्बिर आफ्नो फेसबुक वालमा निरन्तर पोस्ट गर्ने गरेकी छिन् ।
कुनै बेला आफू सौगात मल्लकी प्रेमिका दाबी गर्ने सोनी केसीकी निकटस्थ संगी सुजना विवाहित नायिका अनुष्का ढकालकी बहिनी हुन् । हाल यी दिदी–बहिनी दिल्लीमा छन् । अनुष्काको दाँतको उपचारका लागि यी दिदी–बहिनी नयाँदिल्ली जाने क्रममा पहिले गोवा भ्रमणमा निस्किए । उनीहरू साथीभाइसँग गोवा घुमे, रमाइलो गरे । सुजनाले साप्ताहिकलाई बताएअनुसार गोवाको अत्याधिक गर्मीमा दिदीसँग बियर पिएर रमाइलो गरिरहेका बेला उनलाई गर्मी महसुस भयो । धेरै गर्मी भएपछि नुहाउनका लागि उनी रुममै लुगा फेर्न थालिन् । लुगा फेरिरहेका बेला ‘जतिबेला पनि नांगै हुने’ भन्दै दिदी अनुष्काले जिस्किएर मोबाइलबाट सुजनाको तस्बिर खिचिदिइन् । दिदीले जिस्किएर खिचेको आफ्नो तस्बिर सुजनाले केही सेकेन्डमै डिलिट पनि गरिन् ।
त्यसपछि उनीहरू गोवा घुम्न निस्किए । घुमघामका क्रममा एक क्लबबाट फर्किने क्रममा झोलाबाट उक्त मोबाइल फोन चोरी भयो । त्यस लगत्तै सुजनाले दिदीको मोबाइल प्रयोग गर्दै आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा ‘आइ लस्ट माइ फोन’ स्टाटस अपडेट गरिन् । लगत्तै आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड चेन्ज गर्न खोजिन् । ‘तर, तीन मिनेट भित्रै मेरो फेसबुक ह्याक भैसकेको थियो,’ सुजनाले साप्ताहिकसँग भनिन्, ‘त्यसपछि मैले डिलिट गरेको उक्त नग्न तस्बिर मेरै फेसबुकमा अपलोड हुन थाल्यो ।’
सुजनाले मोबाइल चोरी गर्ने व्यक्तिसँग तुरुन्तै सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन नसकेको बताइन् । ‘मलाई डिलिट गरिएको तस्बिर रिकभर हुन्छ भन्ने थाहा थिएन्,’ ढकालले भनिन्, ‘अहिले मलाई यसले निकै ठूलो मानसिक तनावमा पारेको छ ।
दिदीको उपचारका लागि केही दिन उतै रहनुपर्ने भएकाले आफूलाई कानुनी उपचार खोज्न गाह्रो भएको सुजनाले बताइन । गत बुधबार साप्ताहिकसँग कुराकानी गर्दै सुजनाले भनिन् ‘मेरै फेसबुक ह्याक गरेर यसरी बेइज्जत गर्न थालिएपछि म दिल्ली पुलिसमा उजुरी हाल्दैछु, मेरो मोबाइल चोरी गरेर फोटो रिकभर गर्दै फेसबुक ह्याक गर्ने अपराधी छिट्टै पत्ता लाग्नेछ’ ।
वास्तवमा सुजना ‘डिजिटल मिसयुज’को शिकार भएकी हुन् । मोबाइल फोनमा रहेको क्यामेराले जथाभावी तस्बिर तथा भिडियो खिच्ने र त्यसलाई डिलिट गर्दा पनि रिकभर गर्न सकिने कुराबाट अनभिज्ञ सुजनाको चरित्र हत्या अहिले त्यही तस्बिरको ‘डिजिटल मिसयुज’का कारण भैरहेको छ । जबकी कसैको नग्न तस्बिर सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति बेगर कुनै अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गरिन्छ भने त्यो पनि साइबर अपराध नै ठहर्छ । सुजनाका अनुसार उनी
आफ्नो तस्बिर अनलाइनमा प्रकाशित गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्नेहरूविरुद्ध नेपालमै पनि उजुरी गर्ने निर्णयमा पुगेकी छिन् । जसका लागि दिदीको उपचार जतिसक्दो चाँडो गरेर उनी नेपाल फर्कंदैछिन् । त्यसपछि यो काण्डले कस्तो मोड लिने हो ? प्रतीक्षाकै विषय छ ।
यो साताका यी दुई घटनाले सबैका सामू एउटा प्रश्न भने तेस्र्याएको छ– प्रविधिको दुरुपयोग गरेर महिलाहरूको त्यसमा पनि विशेषत: कलाकार वा सार्वजनिक जीवनमा भएका महिलाहरूको चरित्र हत्या गर्ने यो श्रुंखला कहिलेसम्म जारी रहने हो अनि सत्य–असत्य छुटयाएर मात्र निर्णय गर्ने वा कुनै धारण बनाउने हाम्रो चेतना तथा हाम्रो न्याय प्राणाली कहिले जाग्ने हो ?
त्यो भिडियो सुरबिनाको होइन्
सुरबिना कार्कीको केस के हो ?
त्यो भिडियो नायिका सुरबिनाको कार्कीको होइन् । हामी यस्तो क्रियाकलाप कहाँबाट जेनरेट भयो भनेर अनुसन्धान गर्दैछौं ।
यस्ता केस कत्तिको आउँछन् ?
यस्ता प्रकृतिका धेरै केस आइरहेका हुन्छन् । यो पहिलो केस होइन् ।
कुनै पनि भिडियोमा कसैको नाम जोडेर यसरी प्रचार गरिनुको कारण के हो ?
जनचेतना नै नभए जस्तो देखिन्छ । यस्ता सामग्रीमा कसैको नाम किटेर गलत प्रचार गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको पर्सनल लाइफमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा प्रचार गर्ने मान्छेले ख्याल गर्नुपर्दैन् ?